Citrus - LibreOffice အတွက် interface အသစ်တခုလား။ | Linux မှ
Citrus - LibreOffice အတွက် interface အသစ်တခုလား။
လူတိုင်းသိတယ် LibreOffice သည် facelift လိုအပ်သည်, ၎င်းကိုခေတ်သစ်နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ရန်နှင့် ၀ င်းဒိုး ၃.၁ ကိုပြန်လည်သတိရစေမည့်ဟောင်းနွမ်းသောမျက်နှာပြင်မှဖုန်မှုန့်များကိုဖယ်ရှားရန်။
ကံကောင်းတာက, အ LibreOffice developer များ သူတို့ဖြစ်ကြသည် အလုပ်လုပ်ကိုင် အဲဒါပေါ်မှာ။ မှတစ်ခုဖြစ်သော အခြားနည်းလမ်း ကြောင်း၌သူ၏ဆွေးနွေးတင်ပြလျက်ရှိသည် စာပို့စာရင်း fue ၏ Citrus.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » FileLet ရဲ့ UseLinux » Citrus - LibreOffice အတွက် interface အသစ်တခုလား။
ipad အတွက် interface
ကွန်ပြူတာတစ်လုံးမှာတော့ဒီ interface ကိုသဘောမပေါက်ပါဘူး
Guillem Xanxo ဟုသူကပြောသည်
ကောင်းလိုက်တာ! ကိုယ်ကြိုက်တယ်! ငါ libreoffice ကနေဘယ်လောက်လှောင်ပြောင်သရော်ခဲ့တာလဲ၊ နောက်ဆုံးတော့အရာရာတိုင်းဟာမီးခိုးတွေပဲ။ တကယ်ရှက်စရာပဲ!
Guillem Xanxo အားပြန်ပြောပါ
Mariano gaudix ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ Gtk 3.6 စာကြည့်တိုက်ကိုသုံးပြီး mockup တစ်ခုကိုဖန်တီးခဲ့တယ်။ http://www.youtube.com/watch?v=9ckRn_sx8CE ……… .. http://marianogaudix.deviantart.com/art/LibreOffice-small-program-written-in-Gtk-3-0-309444247
Mariano Gaudix အားပြန်ကြားပါ
မည်သည့်ပြောင်းလဲမှုမဆိုအထူးသဖြင့်ပိုမိုနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသောအရောင်များအတွက်အရေးကြီးပါသည်။ သို့သော် libre office ကိုနေ့စဉ်အသုံးပြုသောသူများသည်သင်၏ site ပေါ်တွင်ထို menu ကိုရှာဖွေလိုသည်။ Office 2007 ကိုပြောင်းလိုက်တဲ့လူတွေအများကြီးသိပြီးအဲဒါအတွက်သူတို့အတွက်ပြforနာဖြစ်လာတယ်။ ဒါကြောင့် ၂၀၀၃ မှာ menu menu တွေပေါ်လာတယ်။ အရေးအကြီးဆုံးကတော့ function တွေမှာပိုပြီးဆန်းသစ်တီထွင်မှုဖြစ်ဖို့၊ msoffice ကိုဆက်လုပ်ဖို့ပါ။ မိုက်ခရိုဆော့သည်မျက်နှာ၏မျက်နှာသွင်ပြင်ပြောင်းလဲခြင်းပြောင်းလဲခြင်းကိုဆန်းသစ်တီထွင်ရန်လိုသည်။
vile gays အားပြန်ကြားပါ
အိုး ... အကယ်၍ သူတို့တကယ်ကိုဒါကိုအကောင်အထည်ဖော်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒါဟာအခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲရဲ့ဗေဒနှင့်ပုံပန်းသဏ္forာန်အတွက်ခုန်ပျံကျော်လွှားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ 🙂
Juan Luis Cano ကိုပြန်ပြောပါ
Ezequiel Oyarzabal ဖြစ်သည် ဟုသူကပြောသည်
Ezequiel Oyarzabal အားပြန်ပြောပါ
ဝန်ခံရမည် M $ ​​Office suite သည်ပိုမိုကြော့ရှင်းပြီးအနည်းငယ်ပိုအသုံးဝင်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံနှင့်ကျွန်ုပ်ပတ် ၀ န်းကျင်မှသူများကကျွန်ုပ်၏စာရေးဆရာကိုတည်းဖြတ်သောအခါသူတို့သည်များစွာသောမီနူးများကြားတွင်ပျောက်ဆုံးသွားပြီးမည်သည့်အရာကိုတိတိကျကျမသိကြပါ။ သုံးစွဲသူများအတွက်ခလုတ်တစ်ခုကိုစာလုံးများဖြင့် menu ထက်သင်ယူရန်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။
Ramiro Rebolledo placeholder ပုံရိပ် ဟုသူကပြောသည်
Ramiro Rebolledo အားပြန်ပြောပါ
Jesus Camacho ဟုသူကပြောသည်
သူတို့တကယ်အလုပ်လုပ်သင့်တာကစာရိတ္တပျက်နေတဲ့ကမ္ဘာကြီးပါ။ အကယ်၍ ခေါင်းစဉ်အမျိုးမျိုးကိုထည့်လိုလျှင်စာမျက်နှာစတိုင်လ်များရှုပ်ထွေးသွားလိမ့်မည် ... Puff
Jesus Camacho အားပြန်ပြောပါ
ရရှိနိုင်သည့် Linux Mint 12 "Lisa"!
Linux Mint 12 "Lisa" ရရှိနိုင်